XISBIGA MUCAARADKA AH EE KULMIYE OO KU HANJABAY IN AANU DIB UGU DULQAADAN DOONIN MASUULIYAD DARADA AY XUKUUMADU KU DHAQANTO | WWW.SOMALILAND.NO
XISBIGA MUCAARADKA AH EE KULMIYE OO KU HANJABAY IN AANU DIB UGU DULQAADAN DOONIN MASUULIYAD DARADA AY XUKUUMADU KU DHAQANTO
Posted on Maajo 6, 2008 by weriye1
Hargeysa(sl.no) 06MAY 2008 – Xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE ayaa ku hanjabay inaanu dib ugu dulqaadan doonin Xadhiga ay Xukuummadu kula kacday Xubnaha Xisbiga ah,isla markaana waxa uu cambaareeyey Xidhiga Abshir Xasan Xaashi oo xubin ka ah Golaha dhexe ee Xisbiga.
Sida waxa uu ku sheegay Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE Md. Axmed Maxamed Maxamuud [Siilaanyo] warsaxafadeed uu ku saxeexan yahay oo nuqul ka mid ahi maanta soo gaadhay Xafiiska Shabakada Wararka ee Hadhwanaagnews.com ee Magaalada Hargeysa.
Waxa kale oo warsaxafadeedka lagu sheegay inay Xukuummadu xadgudubyo iyo dagaalo ku qaaday Xisbiga KULMIYE, kuwaas oo uu xisbigu sheegay inay u arkaan daan-daansi iyo cadaawad xukuumaddu u qabto xisbiga KULMIYE, iyada oo aan ilaa imika inaanu Xisbigu wax jawaab ah ka bixin.
Waxaanu u dhignaa sidan:-
“Tan iyo intii talada dalka uu qabtay daahir Riyaale doorashadii madaxtooyada ee 2003dii ka dib waxa uu dagaal toos ah oo qaawan oo dhinac walba leh af iyo addinba ku qaaday xisbiga KULMIYE, taasoo aanu xisbiga kulmiye marnaba ka bixin jawabtii ku haboonayd ama uu xaqa u lahaa, isagoo xeerinayey waxyaalo badan una arkayey inay jawaab la’aantaa maslaxadi ku jirto.
Xukuumadda daahir riyaale waxa ay marwalba oo ilaa xilligaa aan kor ku sheegnay ku simaan ilaa maanta oo aynnu joogno si cadawtinimo ah ugu isticmaalaysey cabudhinta iyo cadaadiska xisbiga kulmiye awoodda dawladeed ee ay gacanta ku hayso.
Dhibaatada, dibindaabyada, iyo xad-gudubku waxay yihiin kuwo saameeyey dhamaan bulshada reer Somaliland, waxase intooda badan dhibaatadu gaar ugu dhacdaa cidda loo tuhmo inay yihiin taageerayaasha ama xubnaha xisbiga kulmiye.
Waxa taageerayaasha kulmiye xukuumaddu si qaawan ugala dagaallantay dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, qandaraasyada, shaqada dawladda, hay’adaha caalamiga ah, NGOyada maxalliga ah iyo meel kasta oo ay nolosha ka raadsan lahaayeenba.
Dhaqamadani waxa ay ku khasbeen in badan oo umadda ka mid ah in ay muujisan kari waayaan dareenkooda siyaasadeed ee ay xaqa u leeyihiin,
Waxa markhaato madoon ah oo umaddu si cad u ogtahay:
1. in 04/04/2005 xukuumaddu weerar ku qaadday xarunta xisbiga kulmiye iyagoo aan dariiq sharci u soo marin, oo raadinaya idaacad loogu sheegay inay xaruntaas taallo oo kulmiye leeyahay, taasoo haddii ay jiri lahaydba ay ahaan lahayd mid xisbigu xaq dastuuri ah u leeyahay, oo in lagu weeraro iskaba daayoo in laga horjoogsadaa ay xaraan tahay.
2. waxa xukuumaddu isku dayday inay xidho xog-hayihii guud ee xisiga
Daa’uud Maxamed Geelle alla ha u naxariistee 04/04/2008.
3. waxa 2006dii madaxweynuhu shir jaraa’id oo uu qabtay ku sheegay isagoo ku nuuxnuuxsanaya in kulmiye yahay cadwoga gudaha ee Somaliland leedahay, isla markaana ay yihiin qaran dumis.
4. waxa xukuumaddu guud ahaan gaar ahaanna madaxtooyadu xuquuqdeedii muwaaddinnimo ka qaaadday marwada guddoomiyaha xisbiga kulmiye Marwo Aamina Sh. Kaddib markii ay ku guulaysatey imtixaan ay u gashay jago ka bannaanayd hay’adda CARE International, shaqadaasoo madaxtooyadu dhaar iyo wacad ku martay inaanay qabanayn ama hay’addu dalka ka baxayso, aakhirkiina la siiyey nin sawaaxili ah oo ka mid ahaa dadkii imtixaanka galay ee ay kaga guulaysatey.
5. waxa xukuumaddu sannadkii 2006dii si sharciga aan waafaqsanayn u xidhay guddoomiyihii xisiga ee gobolka Awdal.
6. waxa xukuumaddu weerar gelisey guriga xubin ka mid ahayd guddida fulinta ee xisbiga iyadoo doonaysey inay xidho sababo fekerkiisa la xidhiidha dartood (Muuse Biixi)
7. waxa xukuumaddu si sharci darro ah xabsiga u dhigtay muddana ay ugu haysatey xubin ka mid guddida fulinta ee xisbiga ka mid ahayd (C/waaxid C/Qaadir C/Raxmaan).
8. waxa xukuumaddu isku dayday inay xabsiga u taxaabto masuul isna ka mid ah guddida fulinta ee xisbiga kulmiye (Maxamed Kaahin Axmed).
9. 10/04/2008 waxa wasiirka arrimaha guduhu C/laahi cirro warbaahinta caalmaka iyo ta maxalliga ahba ka sheegay inuu kulmiye ka danbeeyey qarax la sheegay inuu ka dhacay guriga guurtida taasoo:
10. 10//4/2008 loo qabtay oday Deyr Maxamed Cilmi.
11. 12/04/2008na loo qabtay guddoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga kulmiye Axmed Cumar X.C/laahi (xamarji).
12. 01/05/2008 waxa xukuumaddu si sharci darro ah xabsiga ugutaxaabtay xubin ka mid ah golaga dhexe ee xisbiga kulmiye ilaa haddana uu u xidhan yahay (Abshir Xasan Xaashi).
Dhamaan dhacdooyinkani waa kuwo la wada ogayahay oo Aan qarsoodi ahayn, mana jirto dhacdo keliya oo xukuumaddu caddaysay, isla markaana mar jirto dhacdo keliya oo maxkamad lagu horgeeyey ciddii lagu eedeeyey, muwaadin walba marka muddo la haysto ee xorriyaddiisii, karaamadiisii iyo tii xisbigiisaba laga lumiyo ayaa lasyka soo daayaa.
Arrimahan aan kor ku soo sheegnay iyo qaar kaleba waxa xisbiga kulmiye u arkyey ilaa haddana u arkaa daan-daansi iyo falal cadowtinnimo oo loola badheedhay, waxa kale oo Kulmiye u arkayey dagaal ay xukuumaddu go’aamisey ama ay caddaysay oo nalagu soo qaaday,
Xisbiga kulmiye waxa uu xukuumadda u soo jeedinayaa in ay sii deyso xubnaha xisbiga ee gardarrada ugu xudhan.
Xisbiga kulmiye waxa uu dhaleecaynayaa falalkaa masuuliyad darrada ah ee xukuumaddu kula dhaqanto, waxaanu caddaynayaa inaanu dulqaad danbe u yeelan doonin una adkaysan doonin tallaabooyin danbe oo noocan ah”
« U SACABA TUNKA UDUB, SOO DHAWEYNTA UCID IYO YABAALKA KULMIYE. “Hindisihii Dhex-dhexaadineed ee Guddoomiyaha Golaha Wakiilada” MIISAANIYAD SANADEEDKA SOMALILAND EE 2008 OO LA HOR KEENAY GOLAHA WAKIILADA. TAAS OO KU DHAW LABAN-LAABKA MIISAANIYADII SANADKII HORE »